I-China KN95 Ukukhiqiza neFektri | Ubuchwepheshe Bezokwelapha Obusekelwe Ebufakazini
1. Isitayela esihle sokuklama nokuvikelwa kwempahla enezingqimba eziningi, engahlunga izinhlayiya kahle futhi ivuselele iphunga elikhethekile, uthuli, amabhaktheriya namagciwane.
2. Ukuhlunga okuqiniswe ngemikhawulo eminingi, ungqimba olufinyelelekayo lwesikhumba, indwangu engaphandle yokwelukiweyo, ungqimba lwe-meltblown, kanye nongqimba wokuhlunga.
Ukuzisika okungu-3.3D okuma-ntathu kungalungisa ukulingana nobuso, kuthuthukise umphumela wokuvikela, ukugoqa okungenamthungo, ukufaka uphawu emaphethelweni kwe-ultrasonic, ukufakelwa okuhle kakhulu, ibhande lokunwebeka eliphakeme, ukwakheka komzimba okubanzi akulimazi isikhumba, isikhathi eside akusona ziqinile, futhi zigqoka zikhululekile kakhulu.
4. I-electrostatic adsorption interlayer ingakwazi ukukhangisa udaba lwezinhlayiyana, nezinye izingqimba zesendlalelo sokuhlunga esisebenza ngongqimba sivikele impilo yokuphefumula.
Isifihla-buso se-N95 sinokusebenza kokuhlunga okungaphezu kuka-95% wezinhlayiya ezinobubanzi obungu-aerodynamic obungu-0.075µm ± 0.02µm. Ububanzi be-aerodynamic bamagciwane omoya nama-fungus spores ikakhulu ahluka phakathi kuka-0.7-10 µm, okuphakathi kobubanzi bokuvikelwa kwamaski we-N95. Ngakho-ke, imaski ye-N95 ingasetshenziselwa ukuvikela ukuphefumula kwezinto ezithile, njengothuli olwenziwe ngesikhathi sokugaya, ukuhlanza nokucubungula amaminerali, ufulawa nezinye izinto ezithile. Ibuye ilungele uketshezi noma uwoyela ongewona owoyili okhiqizwa ngokufafaza. Indaba ethile yegesi eyingozi. Ingakwazi ukusefa ngempumelelo futhi ihlanze iphunga elingajwayelekile eliphefumlelwe (ngaphandle kwamagesi anobuthi), isize ekwehliseni izinga lokuchayeka kwezinhlayiya ezithile ze-inhalable (ezifana nesikhunta, i-anthracis, isifo sofuba, njll.), Kepha ayikwazi ukuqeda ukutheleleka kokuxhumana, ukugula noma izingozi zokufa
Izinhlobo ze: Imaski ye-KN95 Eyabantu: Abasebenzi bezokwelapha noma abasebenzi abahlobene nabo
okujwayelekile: GB2626: 2006KN95 Hlunga ileveli: 99%
Indawo yokukhiqiza: Isifundazwe saseHebei Umkhiqizo:
imodeli: Isitayela seNdebe Uhlobo lwe-disinfection:
usayizi: Isitifiketi sekhwalithi: Ngabe
izinga lokuphepha: igama lomkhiqizo: Imaski ye-KN95
Beka imaski uyisicaba, udonse izandla zakho ziyisicaba bese uyicindezela ubheke ebusweni bakho, ngebhuloho lekhala elide ngaphezulu; amaphuzu abalulekile: gubuzela ikhala, umlomo nesilevu, beka intambo yesifihla-buso ngaphezulu kwekhanda, ibhande elingezansi ngemuva kwentamo, bese ubeka izeluleko zeminwe yakho esiqeshini sekhala, zama ukwenza umphetho wesifihla-buso ulingana nobuso.
1. Geza izandla zakho ngaphambi kokugqoka isifihla-buso, noma gwema ukuthinta uhlangothi lwangaphakathi lwesifihla-buso ngenkathi ugqoke isifihla-buso ukuze unciphise ukuthi kungenzeka kungcoliswe isifihla-buso.
Hlukanisa ingaphakathi nengaphandle, phezulu nangaphansi kwesifihla-buso.
2. Musa ukusikhama isifihla-buso ngezandla zakho. Ama-busi e-N95 angahlukanisa igciwane kuphela ebusweni be-mask. Uma ukhama isifihla-buso ngezandla zakho, igciwane lizongena kumaskhi ngamaconsi, okuzobangela kalula ukutheleleka ngegciwane.
3. Zama ukwenza imaski ilingane kahle nobuso. Indlela elula yokuhlola yilena: Ngemuva kokufaka imaski, phefumula ngamandla ukuze umoya ungakwazi ukuvuza emaphethelweni wesifihla-buso.
4. Isifihla-buso sokuzivikela kumele sisondelane kakhulu nobuso bomsebenzisi. Umsebenzisi kufanele aphuce intshebe ukuqinisekisa ukuthi imaski ihambisana ngokuqinile nobuso. Intshebe nanoma yini ebekwe phakathi kwe-mask gasket nobuso izokwenza ukuthi imaski ivuze.
5. Ngemuva kokulungisa ukuma kwesifihla-buso ngokuya ngobuso bakho, sebenzisa iminwe yenkomba yezandla zombili ukucindezela isiqeshana sempumulo eceleni komphetho ongenhla wesifihla-buso ukusisondeza ebusweni.
Lapho kwenzeka izimo ezilandelayo, imaski kufanele ithathelwe indawo ngesikhathi:
1. Lapho impedance yokuphefumula inyuka kakhulu;
2. Lapho isifihla-buso siphukile noma sonakele;
3. Lapho isifihla-buso nobuso kungeke kwanamathiselwa eduze;
4. Isifihla-buso singcolisiwe (njengamabala egazi noma amaconsi nezinye izinto zangaphandle);
5. Isifihla-buso singcolisiwe (sisetshenziswa ezigcemeni ngazinye noma lapho kuthintwa iziguli);
Langaphambilini Impilo ehlakaniphile konke emshinini owodwa
Olandelayo: Imaski yebhande